लेखिका शीतल दाहाल भन्छिन्ः मजस्ती केटीसँग विवाह गर्ने केटा नेपालमै छैन | Nepalisongskhabar.com
लेखिका शीतल दाहाल भन्छिन्ः मजस्ती केटीसँग विवाह गर्ने केटा नेपालमै छैन
शीतल दाहाल महिला स्वतन्त्रता र यौनका विषयमा निर्भीक कलम चलाउने युवा पुस्ताकी महिला हुन्।
उनका लेखहरूमाथि सोसल मिडिय तथा अलनलाइनहरूमा चर्काे बहस हुने गरेको छ।
हो, मेरो एक जना नजिकको साथीले एकदमै रिसाएर गाली गर्दै अब तेरो विवाह हुने सम्भावना जिरो भयो भन्नुभएथ्यो। उहाँले यस्तो लेखिसकेपछि कसैले पति तसँग विवाह गर्दैन भन्नभाथ्यो।
तर विवाहका बारेमा म यति क्लियर थिएँ कि जो मलाई एउटा हेडलाइन देखेर विवाह गर्न आउँछ, त्योसँग मचाहिँ कहाँ विवाह गर्छु र म पनि विवाह गर्दिनँ। कमसेकम म त्यति लेख्दाखेरि पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएकी थिएँ। हरेक लेखनमा आफ्नो खुट्टामा उभिएको छु भन्ने कुराले मलाई जाँगर दिन्थ्यो। मैले लेखिरहन सक्नुको कारण पनि त्यही हो।
नेपाली केटाहरूको मनस्थिति कस्तो पाउनुभएको छ?
अँ साँच्चै। त्यो खालको चेतना मैले नेपाली केटाहरूमा फेला पारेकी छैन। भेट्छु, केही मानिसहरू भेट्छु तर अझै सुधार्नुपर्नेछ। ऊ केहीँ न कहीँ अलमलिएको छ, मेरो कुरालाई लिएर ऊ अलमलिन्छ। एउटा केटा मसँग विवाहका लागि कुरा गर्न आएको थियो।
उसको भनाइ यसअघि जे जे भयो भयो, अब लेख्न छाडिदेऊ न त भन्ने थियो। जुन कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मैले उसलाई फिर्ता पठाइदिएँ। यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने मलाई त के घाटा लाग्ला, केटाहरूलाई नराम्रोसँग घाटा लाग्छ। भन्नुको अर्थ मसँग विवाह गर्नुपर्यो भन्ने होइन, तर उनीहरूलाई धेरै सुधार्नुपर्ने जरुरी छ।
कस्तो यौन सम्बन्ध हुनुपर्छ?
मैले चाहेको साझेदारीपूर्ण यौन सम्बन्ध हो। त्यो पनि सहभागितापूर्ण अर्थात् साझेदारीमा हुने यौनसम्बन्धको कल्पना गरेकी हुँ मैले।
Published date : 2019-05-03
कपिलले किन गरे यस्तो निर्णय?
‘दाल भात तरकारी’ रिलिज, शत्रु गतेको रेकर्ड तोड्ला ?
मौलिक तीज गीत “परदेशी छोरी” सार्बजनिक (भिडियो सहित)
सुरविर पण्डीतको छारीलाई “नक्कली कान्छी “ भन्दै सरापेले भगाए पछि ………. (भिडियो सहित)
शिल्पीमा सकियो राजेन्द्र लक्ष्मी